RuPaul Ao Amin’ny RuNet : Tonga Any Rosia Noho Ny Fandikànteny An-tsitrapon’ireo Mpisera Amin’ny Aterineto Ny ‘Drag Race’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2017 15:13 GMT
Mahavariana, manan-talenta, pelaka ary miaraka amin'ny dikany amin'ny teny Rosiana : hatramin'ny 2014, nisy vondrona mpandika teny miasa an-tsitrapo avy amin'ny tambajotra sosialy Vkontakte manao izay hahatafiditra amin'ny aterineto miteny Rosiana ny fandaharan'ny télé-réalité amerikana nahazo loka “RuPaul's Drag Race, ( Fifaninànana RuPaul Drag )” ahitàna an'i RuPaul Charles, ilay sarimbavy malaza erantany, mitady izay ho kintana vaovaon'ny ‘drag’ amerikana.
Telo taona lasa izay no niforonany, ny vondrona “RuPaul” ao amin'ny VKontake dia mahavory ekipa misy olona folo tia mandika teny sady mivelatra ka efa hahangona mpisera mazoto maherin'ny 5.000 manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha. Efa tantara 70 mahery no voadikan'ilay ekipa tamin'io fandaharana (izay efa amin'ny andiany faha sivy) io, ahitàna lehilahy maka fombanà vehivavy, miova endrika ary miady mba hahazo ny anaram-boninahitra “Kintana Avon'ny drag Amerikana” mandritra ny andianà fifanintsanana mandreraka.
Na tsy mbola miroborobo toy ny any amin'ny tany Tandrefana aza ny kolontsaina drag any Rosia, dia misy izy, fa tsy mbola miseho masoandro. Efa am-polo taona maro izao no nisiany, sarimbavy no ahafantarana azy, ary mbola misy izy na eo aza ny tsindry ataon'ny fitondrana amin'ny fikambanana LGBT sy ny fahamaroan'ny heloka bevava fankahalàna atao amin'ny mpikambana amin'ny LGBT. Tamin'ny 2014, namboarin'ny Nightline ny sarin’ilay mpanakanto drag rosiana izay nandositra an'i Rosia lasa any Etazonia taorian'ireo fanafihana feno herisetra nitranga natetika tao amin'ny trano fandihizana nahazatra azy tao Mosko.
Nanazava tsotra ny olana sedrain'ny vondrona i Nikita, isan'izany ny ao anatin'ny vondrom-piarahamonina LGBT. ” Ny fiarahamonin'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy any Rosia dia tena tsy mifandefitra. Heverin'ireo pelaka lahy na “voajanahary” fa noho ny amin'ireo pelaka vavy toetra kokoa no anenjehana an-dry zareo, ary ny mifamadika amin'izany no heverin'ireto farany, tafihan'ireo mpanenjika ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy ny pelaka noho ny sasany amin-dry zareo miaina an-kiafina ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy. Eken'ny Drag Race ny maha-vehivavy ary toheriny ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka izay manavakavaka ireo mpikambana vavivavy kokoa. Izany no olana hita ao amin'ny haba-tranonkala fitadiavana naman'ny lahy sy lahy na vavy sy vavy miaraka, toerana ahitàna ireo lehilahy miseho ho tena lehilahy na “masc” matetika mitsipaka ireo izay miseho ho vehivavy amin'ny famaritana “no fems” [“tsy sipa”] amin'ny mombamomba azy ireo. RuPaul izy tenany no nampatsiahy io tranga io tamin'ny fanambaràna fa ” ny voatsindry izy tenany no hanjary ho mpanindry.” Na teo aza izany rehetra izany, dia heverin'i Nikita ho toy ny loharanom-panantenana ilay fandaharana. ” Tena voazarazara ilay vondrom-piarahamonina, saingy heveriko fa afaka hampitambatra indray ny rehetra io fandaharana io.”